KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Beresosɛm Nhoma a Edi Kan 28:1-21
Dawid kaa asɔrefi a wobesi no ho asɛm kyerɛɛ ɔman no (1-8)
Ɔmaa Solomon akwankyerɛ ne ɔdan no ho plan (9-21)
28 Dawid boaboaa Israel mpanyimfo nyinaa ano wɔ Yerusalem; mmusuakuw mpanyimfo, akuwakuw a wɔsom ɔhene no so mpanyimfo, apem apem ne ɔhaha so mpanyimfo,+ mpanyimfo a wɔhwɛ ɔhene ne ne mma nneɛma ne wɔn nyɛmmoa nyinaa so,+ nhenkwaa, akatakyi, ne mmarima akantinka nyinaa.+ 2 Ɛnna Ɔhene Dawid sɔre gyinaa ne nan so kae sɛ: “Me nuanom ne me man, muntie me. Ná ɛda me koma so sɛ mesi ofi a ɛbɛyɛ homebea ama Yehowa apam adaka no na ayɛ yɛn Nyankopɔn nan ntiaso,+ na misiesiee me ho sɛ mesi.+ 3 Nanso nokware Nyankopɔn no ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Ɛnyɛ wo na wubesi ofi ama me din;+ woadi ako pii, na woahwie mogya agu.’+ 4 Israel Nyankopɔn Yehowa paw me fii me papa fifo nyinaa mu sɛ menyɛ Israel hene afebɔɔ;+ Yuda na ɔpaw no ɔkannifo,+ na Yuda abusua mu nso, ɔpaw me papa fi,+ na me papa mma mu nso, me na ogyee me toom sɛ memmɛyɛ Israel nyinaa hene.+ 5 Me mma nyinaa mu no (mma nso de, Yehowa de pii adom me),+ me ba Solomon na ɔpaw no+ sɛ ɔmmɛtena Yehowa ahenni agua a ɛwɔ Israel no so.+ 6 “Ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Wo ba Solomon na obesi me fi ne m’adiwo; efisɛ mede no ayɛ me ba, na mɛyɛ n’agya.+ 7 Sɛ osi ne bo pintinn di me mmara nsɛm ne m’atemmusɛm so+ sɛnea ɔreyɛ no nnɛ yi a, me nso mɛma n’ahenni atim afebɔɔ.’+ 8 Enti migyina Israel, Yehowa asafo nyinaa anim, ka wɔ yɛn Nyankopɔn anim sɛ, monhwɛ nni Yehowa mo Nyankopɔn mmara nsɛm nyinaa so pɛpɛɛpɛ, na monhwehwɛ akyi kwan na moanya asaase pa no so atena,+ na mode ayɛ agyapade agyaw mo mma a wobedi mo akyi aba no daa. 9 “Na wo, me ba Solomon, hu Onyankopɔn a wo papa som no no, na fa koma a edi mu ne ɔkra* mu anigye* som no;+ efisɛ Yehowa hwehwɛ koma nyinaa mu,+ na yɛn tirim adwene nyinaa, ohu.+ Sɛ wohwehwɛ no a, ɔbɛma woahu no,+ na sɛ wugyaw no a, ɔbɛtow wo akyene koraa.+ 10 Hwɛ, Yehowa na wapaw wo sɛ si ofi ma ɛnyɛ tenabea kronkron. Nya akokoduru na fi adwuma no ase.” 11 Afei Dawid de abantenten+ no ne ɛho adan, n’adekora adan, n’abansoro mpia, mpia foforo, ne mpata mmuaso dan*+ no ho plan maa ne ba Solomon.+ 12 Ɔde biribiara a Onyankopɔn nam honhom so de maa no ho plan maa no: Yehowa fi adiwo,+ adidibea a ɛwowɔ ho nyinaa, nokware Nyankopɔn no fi akorae, ne akorae a wɔde nneɛma a wɔayɛ no kronkron*+ gu hɔ no; 13 ɛne akwankyerɛ a ɛfa asɔfo ne Lewifo nkyekyɛm ho,+ ne Yehowa fi adwuma nyinaa, ne nneɛma a wɔde yɛ adwuma wɔ Yehowa fi nyinaa; 14 ɛne sika kɔkɔɔ dodow a wɔnkari, sika kɔkɔɔ a wɔmfa nyɛ ɔsom ho nneɛma nyinaa, ne dwetɛ de a wɔnkari mfa nyɛ ɔsom ho nneɛma nyinaa; 15 ɛne sika kɔkɔɔ dodow a wɔnkari mfa nyɛ sika nkaneadua+ ne ɛho sika nkanea, sɛnea sika kaneadua ne sika kanea biara mu duru te; ɛne dwetɛ dodow a wɔnkari mfa nyɛ nkaneadua ne ɛho nkanea, sɛnea wɔde kaneadua biara bɛyɛ adwuma; 16 ɛne sika kɔkɔɔ dodow a wɔnkari mfa nyɛ apon a wɔhyehyɛ paanoo a wɔde taataa so no* wɔ so,+ ne dwetɛ dodow a wɔmfa nyɛ dwetɛ apon; 17 ɛne adinam ne nkankyee ne nkuruwa akɛse a wɔde sika kɔkɔɔ amapa ayeyɛ ne sika kɔkɔɔ nkankyee nketewa,+ sɛnea kankyee biara mu duru te, ne dwetɛ nkankyee nketewa, sɛnea kankyee biara mu duru te; 18 ɛne sika kɔkɔɔ amapa dodow a wɔmfa nyɛ aduhuam afɔremuka no,+ ne sika kɔkɔɔ kerubim+ a wɔatrɛtrɛw wɔn ntaban mu akata Yehowa apam adaka so a wogyina hɔ ma teaseɛnam no.+ 19 Dawid kae sɛ: “Yehowa nsa wɔ me so, na ɔmaa me nhumu de kyerɛw ɔdan no ho nneɛma nyinaa too hɔ sɛnea ɛho plan te.”+ 20 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ ne ba Solomon sɛ: “Nya akokoduru na ma wo ho nyɛ den na fi adwuma no ase. Nsuro, na mmɔ hu, efisɛ Yehowa Nyankopɔn, me Nyankopɔn no ka wo ho.+ Ɔrempa wo na ɔrennyaw wo+ kosi sɛ wubewie Yehowa fi adwuma no nyinaa. 21 Na asɔfo ne Lewifo a wɔakyekyɛ wɔn mu no+ aboa wɔn ho sɛ wɔbɛba abɛyɛ wɔn adwuma wɔ nokware Nyankopɔn no fi hɔ. Obiara a ɔwɔ adwuma biara ho nimdeɛ no, ofi ne koma mu bɛba abɛboa wo,+ na mpanyimfo+ ne ɔman no nyinaa bedi wo nsɛm nyinaa so.”
^ Anaa “ɔkra a ɛpɛ.”
^ Anaa “bɔne ho mpata dan.”
^ Anaa “nneɛma a wɔahyira so.”